Soomaaliya, 04 October 2019
Ciidamada Danab oo beeniyey sheegashada Al-Shabaab
Afhayeen u hadley ciidamada DANAB aya abeeniyey warar ay baahiyeen kooxda Al-Shabaab oo ay ku sheegteen in ay askar badan ka dileen ciidamadooda.
Bandhigga VOA: Sanad kadib dilkii Khaashuqji
Barnaamijka Bandhigga VOA waxa uu toddobaadkan ku saabsan yahay taariikhda boqortooyada Sacuudi Carabiya, iyo dilkii suxufi Jamaal Khaashaqji loogu gaystay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul, ooh al sano ay kasoo wareegtay.
Beeraleyda Togdheer oo loo qeybiyey 5 nooc oo abuur ah
Bayaan kasoo baxay howl-galka Mareykanka ee Soomaaliya ayaa lagu sheegay in maanta si rasmi ah dib loogu aas-aasay safaaraddii Mareykanka uu ku lahaa Muqdisho.
Shirka Madasha Iskaashiga oo Muqdisho lagu soo xiray
Magaalada Muqdisho waxaa maanta lagu soo geba gebeeyey shir loogu magac-daray Madasha Iskaashiga Soomaaliya iyo Beesha Caalamka.
Deni oo ka hadlay sababta uu u diiday shirka Madasha
Ciidamo ka tirsanaa Danab oo qaraxyo lagu dilay
Warar goor dhowayd naga soo gaaray Gobolka Shabeellada Hoose ayaa sheegaya in laba qarax ay ka dhaceen inta u dhaxaysa Afgooye iyo degaanka Ceelasha Biyaha.
Dhaqanka iyo Hiddaha, Qeybta 489-aad
Puntland oo qaadacday shirka Iskaashiga
Maamulka Puntland ayaa qaadacay shirka caalamiga ah ee Iskaahsiga Soomaaliya iyo Beesha Caalamka, ee maanta Muqdisho ka furmay kadib markii ay sheegeen in ay la dhici waayeen sida wax u wado dowladda Soomaaliya.